အဆိုပါနယ်သာလန် Explore - World Tourism Portal
များအတွက်တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက် World Tourism Portal
မော်တော်ကားငှားရမ်းခြင်း - စကူတာ / ATV ငှားရမ်း - စက်ဘီးငှားရမ်း
Taxi Services စာအုပ်
မြေတပြင်လုံးကမ္ဘာ့ဖလားလက်မှတ်တွေ, Tours မှနှင့်လှုပ်ရှားမှုများ
ရွက်လှေနှင့် Cruises စာအုပ်
ခရီးသွားလာရုရှားနှင့် CIS နိုင်ငံများတွင်များအတွက်မီးရထားလက်မှတ်
လုပ်ပါမှအာရှ၏အကောင်းဆုံးအရာ, Tours မှ, လှုပ်ရှားမှုများ & လက်မှတ်တွေ
အားကစား, ဂီတပွဲ, ပွဲတော်များနှင့်အမေရိကရှိပြဇာတ်ရုံလက်မှတ်တွေ
အရှေ့တောင်အာရှတွင်ရထား, ဘတ်စ်ကား, ကူးတို့, Chartered များအတွက်လက်မှတ်များကို
Global Unlocked SIM ကဒ်ကို ၀ ယ်ပါ
အခြားအသုံးပြုသူများအနေဖြင့် Instagram ကိုရေးသားချက်များ
နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေသောဥရောပနိုင်ငံတစ်ခုကိုနယ်သာလန်နိုင်ငံကိုစူးစမ်းပါ ဂျာမနီ အရှေ့ဘက်၊ တောင်ဘက်တွင်ဘယ်လ်ဂျီယံ၊ ပြင်သစ် ထဲမှာ ကာရစ်ဘီယံ ဒတ်ခ်ျနယ်မြေအဖြစ် Sint Maarten သည်ပြင်သစ်နိုင်ငံ Saint-Martin နှင့်နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေသည်။ နယ်သာလန်၏လူမျိုး၊ ဘာသာစကားနှင့်ယဉ်ကျေးမှုကို“ ဒတ်ချ်” ဟုရည်ညွှန်းသည်။
17 သန်းoverရိယာအနည်းငယ်သာရှိသောလူ ဦး ရေသန်းပေါင်း 41,543 ရှိပြီး,ရိယာသည်လူ ဦး ရေထူထပ်သောမြို့တော်နှင့်အလွန်တူညီသည်။ အမ်စတာဒမ် များစွာသောစိတ်ဝင်စားဖို့မြို့ကြီးများ၏တ ဦး တည်းဖြစ်ခြင်း။ ကြီးမားသောရေတပ်အင်အားကြီးလာသည်နှင့်အမျှဤသေးငယ်သောနိုင်ငံသည်ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များစွာကြွယ်ဝစွာရှိပြီးပန်းချီကားများ၊ လေရဟတ်များ၊ မျက်မှောက်ခေတ်ဥရောပနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံသည်၎င်း၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဂုဏ်သိက္ခာကိုထိန်းသိမ်းကာကွယ်ပြီးလစ်ဘရယ်စိတ်ဓာတ်ဖြင့်လူသိများသည်။ အီးယူနှင့်နေတိုးအဖွဲ့ဝင်များအနေနှင့်၊ ဟိဂ်မြို့ရှိအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံး၏အိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပသောနယ်သာလန်နိုင်ငံသည်နိုင်ငံတကာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၏အချက်အချာဖြစ်သည်။ ၎င်း၏အရွယ်အစားသေးငယ်ပြီးခရီးသွားများနှင့်မြင်ကွင်းများစွာကိုကြိုဆိုခြင်းသည်၎င်းကိုထူးခြား။ အလွယ်တကူရှာဖွေတွေ့ရှိရန်နှင့်ဥရောပခရီးစဉ်အတွက်အလွန်ကောင်းသောဖြည့်စွက်မှုကိုဖြစ်စေသည်။
အဆိုပါနယ်သာလန်တစ်ဦးဆံပိုင်ဘုရင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကအုပ်ချုပ်ရေး 12 ပြည်နယ် (ခရိုင်) သို့ခှဲဝေကန့်သတ်ပါဝါရှိပါတယ်သူတစ်ဦးသည်ရှင်ဘုရင်ရှိပါတယ်ဆိုလိုသည်။ နယ်သာလန်သေးငယ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်သော်လည်း, ထိုပြည်နယ်များအတော်လေးကွဲပြားခြားနားဖြစ်ကြပြီးယဉ်ကျေးမှုနှင့်ဘာသာစကားကွဲပြားခြားနားမှုအများကြီးရှိသည်။ သူတို့ကလေးယောက်ဒေသများတွင်ခွဲခြားနိုင်ပါသည်:
အနောက်တိုင်းနယ်သာလန် (Flevoland, မြောက်ဟော်လန်, တောင်ဟော်လန်, Utrecht)
လေ့ပု Randstad ကိုခေါ်ဒီသည်၎င်း၏လေးအကြီးမားဆုံးမြို့ကြီးများနှင့်အတူနယ်သာလန်၏စိတ်နှလုံးကဲ့သို့ကောင်းစွာအဖြစ်ပုံမှန်ဒတျချြကျေးလက်ဖြစ်ပါတယ်။
မြောက်ပိုင်းနယ်သာလန် (Drenthe, Friesland, Groningen က)
အများအားဖြင့်နိုင်ငံခြားသားတွေအားဖြင့် unexplored ပေမယ့်ဒေသခံတွေအကြားရေပန်းစားအနည်းဆုံးလူဦးရေထူဧရိယာ။ အဆိုပါဖရီစီရအေိုငျမြားကဲ့သို့အနောက်ဖရီစီရကျွန်းစုထဲကရက်အနည်းငယ်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့နေရာများဖြစ်ကြသည်။ Groningen က၏တက်ကြွကျောင်းသားမြို့ကိုလည်းသွားရောက်လည်ပတ်ရကျိုးနပ်သည်။
အရှေ့နယ်သာလန် (Gelderland, Overijssel)
အခြားသူတွေတို့တွင်နယ်သာလန်၏အကြီးဆုံးအမျိုးသားဥယျာဉ်, Hoge Veluws အမျိုးသားဥယျာဉ်အဖြစ်ထိုကဲ့သို့သော Zutphen, Zwolle, Doesburg, အဖြစ်အစဉ်အလာသမိုင်းဝင်စင်တာနှင့်အတူ IJssel မြစ်တလျှောက်တွင်လှပသော Hanzesteden, ခုနစျပါး mediaeval မြို့ကြီးများမှမူလစာမျက်နှာ။
တောင်ပိုင်းနယ်သာလန် (Limburg, မြောက်အမေရိက Brabant, Zeeland)
ယင်း၏ကက်သလစ်သမိုင်း, ပွဲတော်နေ့ပှဲနှင့်၎င်း၏ "အသကျ Burgundian လမ်း" ကကြွင်းသောအရာထဲကနေဝေပေးလေ၏။
အမ်စတာဒမ် - အထင်ကြီးဗိသုကာ, ချစ်စရာကောင်းတဲ့တူးမြောင်း (grachten), ပြတိုက်နှင့်လစ်ဘရယ်သဘောထားများ
Arnhem - ထိုရိုင်းအပေါ်အစိမ်းရောင်မြို့: Sonsbeek, Veluws နှင့် Meinerswijk ဟောင်းနွမ်းရပ်ကွက်နှင့်အိမ်တော်, ယဉ်ကျေးမှုဖြစ်ရပ်များ
Delft - ကမ္ဘာ့-ကျော်ကြားသောအပြာနှင့်အဖြူကြွေထည်နှင့်အတူသမိုင်းဝင် unspoiled မြို့
Groningen က - နေရောင်မရောက်မှီတိုင်အောင်တစ်ဦးစိတ်အေးလက်အေးလေထုနှင့်တွေကတော့နှင့်အတူကျောင်းသားမြို့တက်ရရှိသွားတဲ့
အဆိုပါဟိဂ် - ကမ်ဘာ၏တရားစီရင်ရေးမြို့တော်, အစိုးရ၏ထိုင်ခုံနှင့်တော်ဝင်မိသားစု
Eindhoven - ပဉ္စမအကြီးဆုံးမြို့, ဥရောပ brainport, အနည်းငယ်သာလျော့နည်းခရီးသွားဧည့်သင်အမှန်တကယ်ဒတျချြယဉ်ကျေးမှုကိုတွေ့ကြုံခံစားနိုင်အောင်
Maastricht - တောင်ရှင်ဘုရင်၏ကွဲပြားခြားနားသောယဉ်ကျေးမှု, စတိုင်နှင့်ဗိသုကာဖေါ်ပြခြင်းခိုင်ခံ့သောအလယ်ခေတ်မြို့
Nijmegen - ၎င်း၏ချီတက်ပွဲလူသိများတိုင်းပြည်အသက်အကြီးဆုံးမြို့, လက်ဝဲနိုင်ငံရေးနှင့်ကြီးမားသောကျောင်းသားလူဦးရေ
ရိုတာဒမ် - ခေတ်သစ်ဗိသုကာပညာ, အကောင်းတွေကတော့, တက်ကြွအနုပညာမြင်ကွင်းနှင့်ဥရောပ၏အကြီးဆုံးဆိပ်ကမ်းကို
Utrecht - သမိုင်းဝင်စင်တာ, ရှေးဟောင်းစတိုးဆိုင်များနှင့် Rietveld-Schröderအိမ်
Efteling - elves တွေရဲ့နှင့် dwarves တူသောရေးတဲ့နတ်သမီးပုံပြင်ဒြပ်စင်နှင့်အတူကျော်ကြားဆောင်ပုဒ်ပန်းခြံ
Giethoorn - သေးငယ်တဲ့လှပသောရိုးရာဗိသုကာနှင့်အတူရွာနှင့်တူးမြောင်းအစားလမ်းများ
Hoge Veluws အမျိုးသားဥယျာဉ် - heathlands, သဲခုံများနှင့်သစ်တောများနှင့်အတူအကြီးဆုံးအမျိုးသားဥယျာဉ်
Dwingelderveld အမျိုးသားဥယျာဉ် - ဥရောပမှာအကြီးဆုံးစိုစွတ်သော heathland ၏ 3700 ဟက်တာထိန်းသိမ်း။
Keukenhof - 800,000 ဧည့်သည်တစ်ဦးချင်းစီနွေဦးကဤကြီးမားပန်းပွင့်လယ်ကွင်းတွေ့မြင်ထက်ပို
Kinderdijk - ဤလေရဟတ်အားလုံး၎င်း၏ဘုန်းအသရေအတွက်ကျပုံစံဒတျချြရှုခင်းကိုပြသ
Schokland - 1859 အတွက်ရွှေ့ပြောင်းဟောင်းကျွန်းတစ်ကောင်းမွန်စွာထိန်းသိမ်းထားတစ္ဆေရွာအကြွင်းအကျန်
တောင်ပိုင်း Limburg - ထူထပ်အစိမ်းရောင်ရှုခင်းများ, ပါကျေးရွာများ, ရဲတိုက်များနှင့်ဥယျာဉ်ခြံ
Texel - စက်ဘီးစီးခြင်း, လမ်းလျှောက်, ရေကူးခြင်းနှင့်မြင်းစီးနင်းများအတွက်သင့်လျော်အကြီးဆုံးကျွန်းတစ်ကျွန်း
Waterland နှင့် Zaan ဒေသကြီး - ခုံဖိနပ်, သစ်သားအိမ်များ, လေရဟတ်နှင့် Zaanse Schans နှင့်အတူပုံမှန် Holland ကျေးရွာပေါင်း
Zaanse Schans - ဒတျချြလေရဟတ်နှင့် Zaan အိမ်များနှင့်အတူပွင့်လင်းသောလေထုပြတိုက်
က Burgundians အားဖြင့်အပိုင်းအစတို့ကအပိုင်းအစဝယ်ယူခဲ့သည်အထိတိုင်းပြည်တောင်ပိုင်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသည်သန့်ရှင်းသောရောမအင်ပါယာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အလယ်ခေတ်၏အဆုံးမှာက (အတူတကွယခုဘယ်လ်ဂျီယံသည်အဘယ်အရာနှင့်အတူ) စပိန်အပိုင်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ Little ကအနည်းငယ်သမိုင်းဝင်မြို့စင်တာများနှင့်အနည်းငယ်ရဲတိုက် မှလွဲ. ဤကာလအတွင်းကနေအသက်ရှင်။
အတော်လေးအနည်းငယ်ခရီးသွားများအတွက်က၎င်း၏နာမည်ကြီးဒဏ်ခံသဘောထားကိုပျော်မွေ့ဖို့နယ်သာလန်သို့သွားရောက်: ပြည့်တန်ဆာပေမယ့်တစ်ခုသာခွင့်ပြုတန်ဆာမှာမှတ်ပုံတင်ထားသူတွေကိုပြည့်တန်ဆာများအတွက် decriminalized ဖြစ်ပါတယ်။ လိင်လုပ်သားတွေလမ်းပေါ်မှာဖောက်သည်များနှင့်ပြည့်တန်ဆာအဘို့ကိုမြှူဆွယ်တောင်းခံရန်အဘို့အဒါဟာမြို့တော်အနီရောင်အလင်းခရိုင်ခရီးသွားဧည့်ကိုသာခရီးစဉ်၏တစ်ဦး memento အဖြစ်သွားရောက်လည်ပတ်လျှင်ပင်လူကြိုက်များဘယ်မှာအမ်စတာဒမ်အတွက်အသုံးအများဆုံးများမှာတရားမဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ ပိုပြီးကျေးလက်ဒေသများတွင်ပြည့်တန်ဆာနီးပါး Non-တည်ရှိသည်။ လိင်ဆိုင်များ, လိင်ရှိုးများ, လိင်ပြတိုက်နှင့်မူးယစ်ဆေးပြတိုက်ခရီးသွားဧည့်အကြားမှာလည်းလူကြိုက်များကြသည်။ အဆိုပါရောင်းချမှု, အပိုင်များနှင့်ဆေးခြောက်၏သေးငယ်တဲ့ပမာဏ၏စားသုံးမှု, နည်းပညာပိုင်းနေဆဲတရားမဝင်စဉ်ကတရားဝင်သည်းခံနေပါတယ်, ဒါပေမယ့် coffeeshops ကန့်သတ်တိုးမြှင့်ဖို့ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ခက်ခဲမူးယစ်ဆေးဝါးများ (ဥပမာ ecstasy သို့မဟုတ်ကင်း) နှစ်ဦးစလုံးသီအိုရီများနှင့်လက်တွေ့တွင်တရားမဝင်ရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။ အတူတူပွင့်လင်းစိတ်လေထုလိင်တူဆက်ဆံခြင်းဆီသို့ဒတျချြလွယ်ကူခြင်းဖြစ်ပါတယ်မှာတော့လိင်တူချင်းလက်ထပ်ထိမ်းမြားတရားဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် euthanasia များ၏အလေ့အကျင့်တင်းကျပ်သောအခြေအနေများအောက်တွင်တရားဝင်ဖြစ်ပါတယ်။
နယ်သာလန်၏ပထဝီရေ features တွေကလွှမ်းမိုးနေသည်။ တိုင်းပြည်မြစ်များ, တူးမြောင်းများနှင့်နုတ်မြောင်းများနှင့်အတူ criss-ကူးဖြစ်တယ်, ကမ်းခြေဝေးဘယ်တော့မှဖြစ်ပါတယ်။ နယ်သာလန်၏အနောက်ဘက်ကမ်းခြေအဖြစ်ကောင်းစွာသူတို့တွင်, ဂျာမန်တွေအများကြီးလူတွေသန်းပေါင်းများစွာကိုမပါလျှင်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းထောင်ပေါင်းများစွာကိုဆွဲဆောင်တွေ့နိုင်ပါသည်အလှဆုံးမြောက်ပင်လယ်ကမ်းခြေတစ်ဦးရှိပါတယ်။
Schiphol လေဆိပ်အနီး အမ်စတာဒမ်, ဥရောပအချက်အချာဖြစ်ပြီး, ပြီးနောက် လန်ဒန်, ပဲရစ်နှင့် Frankfurt ဥရောပ၏အကြီးဆုံး။ ၎င်းသည်နိုင်ငံ၏အကြီးဆုံးသောနိုင်ငံတကာလေဆိပ်ဖြစ်ပြီး4မီတာထက်နိမ့်ကျသောပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အောက်တွင်ရှိသည့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်အချက်ဖြစ်သည် (Schiphol သည်ရေနုတ်မြောင်းသောကန်တွင်တည်ဆောက်ပြီးကတည်းကအမည်ကို“ သင်္ဘောတွင်း” မှဆင်းသက်လာခြင်း) ။ ခရီးသွားများသည်ကမ္ဘာ့နေရာအနှံ့အပြားမှအလွယ်တကူပျံသန်းနိုင်ပြီးဒတ်ခ်ျအကြီးဆုံးလေကြောင်းလိုင်း KLM နှင့်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။
အဆိုပါဟိဂ်လေဆိပ်နှင့် Groningen က-Eelde လေဆိပ် - အခြားအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ် Eindhoven လေဆိပ်, Maastricht / Aachen လေဆိပ်, ရိုတာဒမ်ဖြစ်ကြသည်။
တစ်ဦးကကားကိုထိုကဲ့သို့သော Veluws, Zeeland နှင့် The မြောက်ပင်လယ်ကျွန်းများ၏အစိတ်အပိုင်းများအဖြစ်ရထားလမ်းအားဖြင့်ချိတ်ဆက်မအထူးသဖြင့်အရပ်တို့ကို, ကျေးလက်စူးစမ်းဖို့ကောင်းတစ်ဦးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကားလမ်းကွန်ယက်ကိုအကြီးအကျယ်အသုံးပြုခဲ့သော်လည်းကျယ်ပြန့်သည်။ အထွတ်အထိပ်နာရီကာလအတွင်းပိတ်ဆို့မှုကိုပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်ပြီးပိုကောင်းရှောင်ရှားနိုင်ပါသည်။ လမ်းများကောင်းစွာ signposted နေကြသည်။ ယာဉ်မောင်းလက်ျာဘက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ မြို့ကြီးများအတွက်ကားမောင်းတဲ့အခါမှာတစ်ဦးသံသရာလမ်းသွားအနှံ့လှည့်အခါ, အစဉ်အမြဲစက်ဘီးစီးဖို့ဦးစားပေးပေးပါ။
ဖရီစီရမှာလည်းတရားဝင်ဘာသာစကားအဖြစ်တရားဝင်, နယ်သာလန်, ဘာသာစကားနှစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဖရီစီရအင်္ဂလိပ်မှဒုတိယအနီးဆုံးလူနေမှုဘာသာစကားဖြစ်ပါသည်
"သူတို့ကအားလုံးရှိအင်္ဂလိပ်စကားပြော" ဟုအဆိုပါနယ်သာလန်ဘို့အတော်လေးတိကျသည်။ အင်္ဂလိပ်စာနှင့်အခြားဥရောပဘာသာစကားများအစောပိုင်းအသက်အရွယ်ကနေပညာရေး (အများအားဖြင့်ဂျာမန်နှင့်အငယျဆုံးသောဒီဂရီပြင်သစ်မှ) ဒတျချြတိုက်ကြီးအပေါ်အများဆုံးကျွမ်းကျင်စွာတတ်တဲ့အချို့စေသည်, နှင့်အင်္ဂလိပ်မဟုတ်ပါဘူးရှိရာကမ္ဘာ့ဒုတိယအများဆုံးအင်္ဂလိပ်ကျွမ်းကျင်တိုင်းပြည် (ဆွီဒင်နိုင်ငံပြီးနောက်; 90 လူဦးရေရဲ့% မှာအနည်းဆုံးအချို့သောအင်္ဂလိပ်ပြောတတ်) အရာရှိတဦးက။
ယင်း၏သေးငယ်တဲ့အရွယ်အစားစဉ်းစား, ဒီတိုင်းပြည်ကမ္ဘာကျော်ပန်းချီဆရာများတစ်ဦးအထင်ကြီးအရေအတွက်ကရှေ့ကိုယူဆောင်ခဲ့သည်။ ဝိဇ္ဇာနှင့်ပန်းချီဒတျချြသမ္မတနိုင်ငံအထူးသဖြင့်ချမ်းသာကြွယ်ဝခဲ့သောအခါ, 17th ရာစုအတွင်းထွန်းကားပေမယ့်ကျော်ကြားတဲ့အနုပညာရှင်အဖြစ်ကောင်းစွာကြောင်းအသက်အရွယ်မတိုင်ခင်နဲ့အပြီးတိုင်းပြည်တှငျနထေိုငျပါပွီ။
Rembrandt, ဂျိုဟန် Vermeer, Vincent Van Gogh, Frans Hals ဇန်နဝါရီ Steen, ယာကုပ်ဗန် Ruysdael နှင့် Piet Mondriaan အဘယ်သူ၏အကျင့်ကိုကျင့်ယခုကမ္ဘာ့အကြီးမြတ်ဆုံးပြတိုက်၏နံရံအလှဆင်ဒတျချြပန်းချီဆရာများ၏အနည်းငယ်ရှိပါတယ်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, ဤကမ္ဘာ့အဆင့်မီပြတိုက်၏အချို့သောအဖြစ်ကောင်းစွာနယ်သာလန်နိုင်ငံတွင်တွေ့နိုင်ပါသည်။ အမ်စတာဒမ်အတွက်ပြတိုက်ရပ်ကွက်, ဘေးမှာအချင်းချင်းအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ collection များကိုအတူအားလုံးသုံး Rijksmuseum, အ Van Gogh ပြတိုက်နှင့် Stedelijk ပြတိုက်ရှိပါတယ်။ ရိုတာဒမ်အတွက်ပြတိုက် Boijmans ဗန် Beuningen လည်း Rembrandt, Van Gogh, နှင့်နိုင်ငံခြားသခင်အပါအဝင်ရေးဆွဲတဲ့ကြီးမားတဲ့စုဆောင်းခြင်း, ရှိပါတယ်။
Kröller-Müllerပြတိုက်သည် Hoge Veluwe အမျိုးသားဥယျာဉ်တွင်လှပစွာတည်ရှိပြီးကမ္ဘာပေါ်တွင်ဒုတိယအကြီးဆုံး Van Gogh စုဆောင်းမှု (အမ်စတာဒမ်ရှိ Van Gogh ပြတိုက်ပြီးနောက်) ရှိသည်။ ဒတ်ခ်ျအနုပညာအပေါ်အာရုံစူးစိုက်မှုနည်းသော်လည်း၊ ထူးခြားသောခေတ်သစ်စုဆောင်းမှုဖြင့် Eindhoven ရှိ Van Abbe ပြတိုက်ဖြစ်သည်။ ထင်ရှားသောအနုပညာပြတိုက်နှင့်အတူအခြားမြို့များ Groninger ပြတိုက်နှင့်အတူ Groningen နှင့် Frans Hals ပြတိုက်နှင့်အတူ Haarlem ပါဝင်သည်။ အသစ်စက်စက်ထူထောင်ခဲ့သောအမ်စတာဒမ်၌ Hermitage တွင်သူ၏အစ်မကြီးတစ်ယောက်၏ခမ်းနားထည်ဝါမှုရှိသည် စိန့်ပီတာစဘတ်ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်အတူ ရုရှားနိုင်ငံပြပွဲအပေါ် -oriented ပြပွဲ။
1916 အတွက်အကြီးအကျယ်ရေလွှမ်းမိုး, တိုင်းပြည်ဟာ Zuiderzee Works, တစ်ချိန်ကအပေါင်းတို့နှင့်တကွများအတွက် Zuiderzee ပြန်ဖြစ်နှင့်ယဉ်ဖို့အကြီးအကျယ်ခံဝန်စတင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ 1930s မှာအထင်ကြီး Afsluitdijk အဆိုပါ IJsselmeer လို့ခေါ်တဲ့လတ်ဆတ်တဲ့ရေအိုင်ထဲသို့ကုန်းတွင်းပိုင်းပင်လယ်လှည့်အရာ, ချောဖြစ်ခဲ့သည်။ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ Enkhuizen အတွက် Zuiderzee ပြတိုက်ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်နှင့်လူထုပုံပြင်များဒေသ, အဖြစ် Zuiderzee ၏ရေကြောင်းဆိုင်ရာသမိုင်းမှမြှုပ်နှံနေသည်။
နောက်ထပ်အကြီးအကျယ်ရေလွှမ်းမိုး Zeeland ၏ပြည်နယ်မှာ 1953 သေဆုံးမှုမှတ်တမ်းတင်, 1,836 အတွက်တိုင်းပြည်လုပ်ကြံလေ၏။ အောက်ပါငါးဆယ်နှစ်များတွင်နာမည်ကြီးမြစ်ဝကျွန်းပေါ်အလုပ်လုပ်ရေကြီးမှုကနေနယ်သာလန်၏တောင်ဘက်-အနောက်ပိုင်းခရိုင်ရှိရမည်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ဆောက်လုပ်ထားခဲ့သည်။ ဒါဟာ Oosterscheldekering အနီးရှိ Neeltje Jans ပန်းခြံဖြစ်ပါတယ်အရှိဆုံးမှတ်သားလောက်သည့်အရာအမျိုးမျိုးဧည့်သည်စင်တာများ, (အရှေ့ Scheldt မုန်တိုင်း Barrier ဒီရေလှိုင်း) မှာသွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာများ၏အမေရိကန်လူ့အဖွဲ့အစည်းဟာခေတ်သစ်ကမ္ဘာ့အံ့ဖွယ်ခုနစ်ပါးတွင်တစ်ဦးအဖြစ်စုပေါင်းအဆိုပါ Zuiderzee အလုပ်လုပ်နှင့်မြစ်ဝကျွန်းပေါ်အလုပ်လုပ်အသိအမှတ်ပြုခဲ့သည်။
Sinterklaas သည်ယနေ့ခေတ်နယ်သာလန်နှင့်အခြားနိုင်ငံများ၌ယနေ့ထိကျင်းပနေဆဲဖြစ်သောရိုးရာဆောင်းရာသီအားလပ်ရက်ဖြစ်သည်။ သူ၏မွေးနေ့ (ဒီဇင်ဘာ 6th) သည်စိန့်နီကိုးလပ်စ်အကြို (ဒီဇင်ဘာ 5th) တွင်နှစ်စဉ်ကျင်းပသည်။ ထိုပွဲသည်မိသားစုကိစ္စဖြစ်သောကြောင့်ထိုပွဲသည်ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွား as ည့်သည်အဖြစ်မြင်ရန်အခွင့်အလမ်းနည်းသည်။ Sinterklaas သည်အစဉ်အလာအားဖြင့်နယ်သာလန်သို့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းနိုဝင်ဘာလလယ် (ပုံမှန်အားဖြင့်စနေနေ့တွင်) မှသင်္ဘောဖြင့် စပိန်။ Sinterklaasintocht (သူသည်မြို့ကို ဖြတ်၍ သွားလာခြင်း) သည်လူသိရှင်ကြားဖြစ်ပြီးမြို့တိုင်းနီးပါးမှစီစဉ်သည်။ သူရောက်ရှိချိန်မှစပြီးသူ၏အခမ်းအနားအထိဈေးဝယ်စင်တာများရှိ Sinterklaas (သို့) zwarte pieten (သူ၏ကူညီသူများ) သို့သင်လမ်းလျှောက်နိုင်သည်။
သငျသညျချင်လျှင် Sinterklaas အစဉ်အလာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုတွေ့ကြုံခံစား, သင့်ရဲ့အကောင်းဆုံး option ကို Sinterklaas ၏ဆိုက်ရောက်သွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့ဖြစ်ပါတယ်, အ Sinterklaasintocht တောင်းဆိုခဲ့သည်။ နိုဝင်ဘာလ 10th နှင့် 16th နှင့်အားလုံးနီးပါးမြို့ကြီးများအတွက်သေးငယ်အထိမ်းအမှတ်ပွဲများကျင်းပပြီးနောက်နေ့ကိုအကြားစနေနေ့ပေါ်မှာ designated မြို့မှာရှိတဲ့ကြီးမားတဲ့အခမ်းအနားရှိပါသည်။ Pepernoten, Kruidnoten, taai-taai, ချောကလက်ဒင်္ဂါးပြားသို့မဟုတ်ချောကလက်အက္ခရာများ: ဒါ့အပြင်ကဲ့သို့သောအချို့သော Sinterklaas သကြားလုံးဝယ်ယူစဉ်းစားပါ။ အဆိုပါသကြားလုံးစက်တင်ဘာလကနေဒီဇင်ဘာလ၏ပဉ္စမသည်အထိစူပါမားကက်နှင့်အခြားသကြားလုံးရောင်းစတိုးဆိုင်များတွင်ရရှိနိုင်ပါသည်။
ဒေသခံတွေအကြားလူကြိုက်အများဆုံးလှုပ်ရှားမှုများတစ်ခုမှာစက်ဘီးစီးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအခါအကြောင်းပြချက် - နယ်သာလန်ရေတွက်သူတို့ထဲကအတော်များများနှင့်အတူတိုင်းပြည်-ကူး criss ရသောဆက်ကပ်အပ်နှံစက်ဘီးလမ်းကြောင်း၏ 22,000 ကီလိုမီတာခန့်ရှိပါတယ်။ ဒါဟာအရေအတွက်ကကောက်နေတဲ့မြေပုံရတဲ့အဖြစ်လွယ်ကူခြင်း, စက်ဘီးစီးခြင်း start! အထူးသဖြင့်စက်ဘီးစီးများအတွက်ကောင်းစွာသင့်လျော်သာယာလှပဒေသများအတွက်အစိမ်းရောင်နှလုံး, Hoge Veluws အမျိုးသားဥယျာဉ်, တောင် Limburg, နှင့် Waterland နှင့် Zaan ဒေသကြီးတို့ပါဝင်သည်။ ရုံလေတိုက်နှုန်း (အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အပြားမြေများ၏) ခိုင်ခံ့ခြင်းရှိနိုင်သည်ကိုသတိထားပါနှင့်ဆောင်းရာသီအအေးနှင့်မိုးရာသီဖြစ်နိုင်ပါသည်။
ဒတျချြကမ်းရိုးတန်းအစီအမံအများအပြားကမ်းခြေနှင့်အတူပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်း 1,245 ကီလိုမီတာ။ လူကြိုက်များလှုပ်ရှားမှုများရေကူးခြင်းနှင့် sunbathing ပါဝင်သည်ပေမယ့်ဒီနွေရာသီမှာရက်ပေါင်းနွေးဖို့အများအားဖြင့်ကန့်သတ်ကြသည်။ အပူချိန်အပူပိုင်းအဆင့်ဆင့်ကိုဦးတည်ထသောအခါ Scheveningen အလွန်လူစည်ကားဖြစ်ဖို့မြျှောလငျ့။ ပိုများသော mellow နှင့်မိသားစုဖော်ရွေကမ်းခြေ Zandvoort, Bloemendaal, ဘာဂန်များနှင့်အနောက်ဖရီစီရကျွန်းများပါဝင်သည်။
ရေအားကစားအများစုမှာဒေသခံတွေကဆောငျရှကျအခြားလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပါတယ်။ ရေကန်များတိုင်းပြည်နယ်တွင်တွေ့နိုင်ပါသည်, သို့သော်ဖရီစီရအေိုငျမြား, အထူးသဖြင့်လှေရာသီစတင်သည်သောနှစ်ပတ်လည် Sneekweek ကာလအတွင်းထူးချွန်ဖြစ်ကြသည်။ ဘုတ်စီးနေသည်နေသမျှကာလပတ်လုံးလှေ 15m ထက်မရှိတော့သည်နှင့် / သို့မဟုတ်ပိုမြန် 20km / ဇကြောင်းအဖြစ်လိုင်စင်မရှိဘဲလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။ အခွားသောအိုင်ပေါများသောနေရာများတွင် Wijdemeren, Kaag နှင့် Aalsmeer ပါဝင်သည်။ ဤအရေကန်အများစုဟာလေထီးယာဉ်စီးခြင်းနှင့်မဖြစ်နိုင်ဖောင်တွေအလွန်အေးဆေးတည်ငြိမ်ဖြစ်ကြသည်။
များသောအားဖြင့် 9AM ကစျေးဆိုင်များကိုဖွင့်လေ့ရှိသည်။ များသောအားဖြင့် 5: 30PM သို့မဟုတ် 6PM ။ “ koopzondag” မှအပကျန်ဆိုင်အများစုသည်တနင်္ဂနွေနေ့များတွင်ပိတ်ကြသည်။ “ Koopzondag” ဆိုသည်မှာအကြီးမားဆုံးအစိတ်အပိုင်းသို့မဟုတ်ဆိုင်အားလုံးဖွင့်လှစ်သည်ကိုဆိုလိုသည်။ တနင်္ဂနွေသည်“ koopzondag” ဖြစ်ပြီးတစ်မြို့နှင့်တစ်မြို့ကွဲပြားသည်။ မြို့အများစုတွင်၎င်းသည်တစ်လအတွင်း၏နောက်ဆုံးသို့မဟုတ်ပထမဆုံးတနင်္ဂနွေဖြစ်သည်။ မြို့အနည်းငယ် (အမ်စတာဒမ်၊ ရိုတာဒမ်, အဆိုပါဟိဂ်, Utrecht နှင့် Leiden) ဆိုင်များကိုတနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းဖွင့်လှစ်လေ့ရှိပြီးအများစုမှာမွန်းတည့်ချိန်မှ စ၍ 5PM သို့မဟုတ် 6PM အထိဖွင့်ကြသည်။ In အမ်စတာဒမ် စင်တာareaရိယာသည်ခြွင်းချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာသင်သည်စျေးဆိုင်များကို 9PM မတိုင်မီနှင့်တနင်္ဂနွေမှမွန်းတည့်ချိန်မှ 6PM အထိမြင်နိုင်သည်။ မြို့ပြင်ရှိလူများထံမှမြို့တွင်းသို့လာရောက်သူများနှင့်ဆိုင်သောစျေးဆိုင်များတွင်ပြည့်နေနိုင်သည်။ အချို့ဒေသများတွင်ဆိုင်များကိုတနင်္လာနေ့တွင်ပိတ်ထားသည်
ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအကြောင်းပြချက်များအတွက်, နယ်သာလန်အတွက်ခရက်ဒစ်ကဒ်အသုံးပြုမှု PIN ကို-code ကိုလိုအပ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ခရက်ဒစ်ကဒ်အသုံးပြုမှုကိုကျိုးကြောင်းဆီလျော်ဘုံ, ဒါပေမယ့်အမေရိကန်, ဗြိတိန်သို့မဟုတ်ယမ်ထဲမှာရှိသကဲ့သို့အဝေးကအများကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒတျချြသူတို့ကိုယ်သူတို့မကြာခဏပင်သေးငယ်တဲ့စျေးဆိုင်နှင့်စျေးကွက်ပုံမှန်အားဖြင့်စက်ရှိရပ်တည်ရာများအတွက်ဗီဇာသို့မဟုတ် MasterCard ကိုလိုဂိုမပါဘဲ, ဆိုလိုသည်မှာဒက်ဘစ်ကဒ်ဒေသခံဘဏ်ကတ်များကိုအသုံးပြုပါ။ ခရီးသွားဧည့်နေရာများ၌သင်တို့ကိုယေဘုယျအားဖြင့်ကျယ်ပြန့်လက်ခံထားသောအကြွေးကဒ်များကိုရှာဖွေအဖြစ်တိုင်းပြည်၏ကျန်အတွက်ပိုကြီးတဲ့စျေးဆိုင်များနှင့်စားသောက်ဆိုင်များတွင်ပေမယ့်ကြိုတင်တောင်းပန်များသောအားဖြင့်အဝင်ဝမှာပြသသော icon တွေကိုစစ်ဆေးပါလိမ့်မယ်။ အများဆုံးစူပါမားကက်မှသာဒေသခံဒက်ဘစ်ကဒ်မဟုတ်ဘဲနိုင်ငံခြားခရက်ဒစ်ကဒ်များကိုလက်မခံကြောင်းသတိပြုပါ။ တချို့ကသင်စျေးဝယ်သွားမီငွေသားထုတ်ယူနိုင်ပါသည်ရှိရာဝုဏ်တခုတခုအပေါ်မှာ ATM စက်များရှိသည်။
ATM စက်အများအားဖြင့်စျေးဝယ်ခြင်းနှင့်တွေကတော့ဒေသများအနီးအလွယ်တကူရရှိနိုင်ပါသည်။ ဖယ်ထုတ်ထားအလွန်သေးငယ်ဆုံးသောသူတို့ကိုပင်ကျေးရွာများများသောအားဖြင့် ATM စက်ရှိသည်။ ထိုအစက်အဘို့ဒတျချြစကားလုံး "pinautomaat" ဖြစ်ပြီး, ATM စက်ကနေငွေသားဆုတ်ခွာပြီးဒက်ဘစ်ကဒ် ( "pinpas") နှင့်အတူပေးဆောင်နှစ်ဦးစလုံးအဓိပ္ပာယ်ကြိယာ "pinnen" ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါနယ်သာလန်ပန်းပွင့်ကိုဝယ်ခြင်းငှါအကောင်းတစ်ဦးနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ပန်းဆိုင်အပြင်, သငျသညျအမြားဆုံးစူပါမားကက်ထဲမှာ Pre-ထုပ်ပိုးသူတို့ကိုမဝယ်နိုင်ပါ။
အဆိုပါနယ်သာလန်က၎င်း၏သစ်သားဖိနပ်ကျော်ကြားသည်။ သို့သော်ယနေ့ခေတ်နီးပါးအဘယ်သူမျှမက, ကျေးလက်များတွင်လယ်သမားများအတွက် မှလွဲ. သူတို့ကိုကျီ။ သငျသညျရက်သတ္တပတ်များအတွက်နယ်သာလန်မှတဆင့်ခရီးသွားလာနဲ့ဖိနပ်အဘို့ထိုသူတို့ကို အသုံးပြု. အဘယ်သူမျှမရှာနိုင်။ သူတို့ကိုသင်ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်ရှိရာသာရာအရပ်ကိုခရီးသွားဧည့်ဆိုင်များနှင့်ကြီးမားသောဥယျာဉ်ကိုစတိုးဆိုင်၌တည်ရှိ၏။ အများပြည်သူအတွက်သစ်သားဖိနပ်ဝတ်ထားဒေသခံတွေထံမှသင်တို့အတော်လေးအနည်းငယ်ထူးဆန်းတဲ့ရူပရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
သငျသညျသူတို့အပျေါမှာကွိုးစားပြုလျှင်နာမည်ကြီး "သစ်သားဖိနပ်" အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်သက်သာဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, မည်သည့်ကျေးလက်နေ setting ကိုအတွက်အလွန်အသုံးဝင်သော။ All-မြေပြင်အနေအထားဖိနပ်အဖြစ်သူတို့ထဲကစဉ်းစားပါ, ဥယျာဉ်, လယ်ပြင်၌တစ်ခုသို့မဟုတ်ဖုန်လမ်းမပေါ်တွင်လမ်းလျှောက်ပေါ်တွင်တင်ရန်လွယ်ကူ။ သငျသညျအိမျမှာနေတဲ့ကျေးလက်ဧရိယာ၌အသက်ရှင်လျှင်သင်သည်တတ်နိုင်လျှင်သင်တို့နှင့်အတူဤအရာတစ်စုံကိုယူပြီးစဉ်းစားပါ။ သငျသညျအရာမခံစားရပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်တစ်ဦးကအရည်အသွေးကောင်းသစ်သားဖိနပ်, 10 ကီလိုဂရမ်အထိကျဆင်းအရာဝတ္ထုကနေသင်၏ခြေကိုကာကွယ်ပေးသည်။ သစ်သားဖိနပ်မိုးမခသို့မဟုတ်လိဗနာသစ်သားကနေဖန်ဆင်းတော်ကြပါတယ်။ ထင်းခက်ခဲပြီးပိုချုံ့ကြောင့်မိုးမခ, လိဗထက်ပိုစျေးကြီးသည်။ ဒါဟာမိုးမခ၏သစ်သားဖိနပ်အားကောင်းနှင့်ပိုပြီး wear-ခံနိုင်ရည်ဆိုလိုသည်။ ဒါ့အပြင်သူတို့ကပိုကောင်း insulator တွင်လည်းနှင့်ပိုပြီးရေကိုခံနိုင်ရည်ရှိပါတယ်။
အရည်အသွေးကောင်းသစ်သားဖိနပ်သည် ဖြစ်. , Schiphol နှင့်အမ်စတာဒမ်ရဲ့ Damrak လမ်းပေါ်မှာ kitschy ခရီးသွားဧည့်စျေးဆိုင်ကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်း, အစားအများအားဖြင့်ကျေးလက်ဒေသများရှိမြို့ရွာများတွင်တွေ့နိုင်ပါသည်ရာထိုကဲ့သို့သော Welkoop အဖြစ်ပုံမှန်ရောင်းချသူ (ရှာဖွေပါ။ Friesland ၏မြောက်ပိုင်းပြည်နယ်သစ်သားဖိနပ်ရောင်းတဲ့စတိုးဆိုင်အများကြီးရှိပါတယ်, မကြာခဏဖရီစီရအလံ၏တောက်ပသောအရောင်အဆင်းနှင့်အတူတန်ဆာဆင်။
အဆိုပါနယ်သာလန်က၎င်း၏အစားအစာများအတွက်မသိရပေမယ့်ကောင်းမွန်စွာပြုကြလျှင်ချစ်ဘွယ်သောလက္ခဏာဒတျချြခအတော်လေးကောင်းဖြစ်နိုင်ပါ။ ဤ "ပုံမှန်အားဖြင့်ဒတ်ခ်ျ" စားသောက်ကုန်များ၏အချို့ထံမှသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားသောအရသာ, ဒါပေမယ့်သေချာပေါက်အပျေါမှာတိုးတက်စေပါဘူး, အခြားနိုင်ငံများအနေဖြင့်အထူး။ ဥပမာ, ဒတျချြကော်ဖီနဲ့ချောကလက်ကျွမ်းကျင်သူများအတွက်အိမ်လွမ်း၏ခံစားချက်များကိုရှိအောင်နိုင်ပါတယ်နှင့် "စိတ်ဝိညာဉ်ကိုအစာ", ဒဏ်ငွေဘယ်လ်ဂျီယံချောကလက်နဲ့အီတလီကော်ဖီ (အိတ္စပရပ္, etc) အဖြစ်ရှုမြင်စေခြင်းငှါအနေဖြင့်ပျော်မွေ့စရာဖြစ်မည်ယူဆနေကြသည်။ ဒတျချြသို့သျောလညျး, သူတို့ရဲ့အထူးနှင့်အရသာရယူထားသောလူသိများကြသည်: အဘယ်အရာကိုနယ်သာလန်အတွက်စားရန်
အဆိုပါနယ်သာလန်ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး '' ကိုထိပုတ်ပါရေ '' အချို့ရှိပါတယ်။ သူကတောင်သဘာဝကဓာတ်သတ္တုသို့မဟုတ်နွေဦးရေထက်အလားတူသို့မဟုတ်အရည်အသွေးပိုကောင်းဖြစ်စဉ်းစားသည်နှင့်တိုင်းအိမ်သူအိမ်သားမှဖြန့်ဝေခြင်းနှင့် '' ရေအာဏာပိုင်များ '' ကထိန်းချုပ်ထားသည်။ အစားအသောက် (ကစူပါမားကက်များတွင်ဝယ်ယူခြင်းသို့မဟုတ်စားသောက်ဆိုင်မှာစားရဖြစ်စေ) ဖြစ်စေမည်သည့်ပြဿနာရှိုးသင့်ပါဘူး။ ကနျြးမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစနစ်အားဥရောပ၏ကျန်တွေနဲ့တန်းတူမှတက်သည်နှင့်အများဆုံးမြို့ကြီးများပုံမှန်အားဖြင့်န်ထမ်းအများစုအင်္ဂလိပ်ပြောတတ်ရှိရာဆေးရုံများ (အနည်းဆုံးအားလုံးဆေးဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်း) ရှိသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ကဘုံအသိတစ်ဦးအမှုဖွင့်။
အင်တာနက်ဆိုင်များအများဆုံးမြို့ကြီးများတွင်တွေ့နိုင်ပါသည်; များသောအားဖြင့်သူတို့မှာလည်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခေါ်ဆိုမှုပြခန်းပေး။ အတော်များများကပြည်သူ့စာကြည့်တိုက်ကိုအင်တာနက် access ကိုပေးသညျ။ Wi-Fi ကို အသုံးပြု. ကြိုးမဲ့အင်တာနက် ပို. ပို. လူကြိုက်များဖြစ်လာနှင့်ဟော့စပေါ့၏အမျိုးသားရေး "ကွန်ရက်များ" ၏တဦးတည်းမှတဆင့်အများအပြားဟိုတယ်များ, အရက်ဆိုင်, ဘူတာနှင့် Schiphol ပေါ်တွင်ဖြစ်စေအခမဲ့, ဒါမှမဟုတ်အနိုင်အထက်လုယူစျေးနှုန်းများမှာရရှိနိုင်ပါသည်။
Willemstad, Inner City နှင့်ဆိပ်ကမ်း, Curaçao၏သမိုင်းဝင်Areaရိယာ
Ir.DF Woudagemaal (DF Wouda ရေစုပ်စက်)
Rietveld Schröderhuis (Rietveld Schröderအိမ်)
Singelgracht အတွင်းရှိအမ်စတာဒမ်၏ ၁၇ ရာစုတူးမြောင်းကွင်းပတ် ၀ န်းကျင်
ပိုမိုသိရှိလိုပါကတရားဝင်အစိုးရ website ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး:
ပျံသန်းမှုလက်မှတ်များ - ဟိုတယ်များ - ယာဉ်ငှားရမ်းခြင်း - တက္ကစီ - ပြတိုက်နှင့်လှုပ်ရှားမှုများ - ခရီးသွားကိရိယာ - မီးရထားလက်မှတ် - ခရီးသွားဝန်ဆောင်မှု
သငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုသင်အကြိုက်ဆုံးနေရာအရပ်အကြောင်းကိုဘလော့ Post ကိုဖန်တီးချင်တယ်ဆိုရင်,
အသုံးဝင်သောခရီးသွားလာရေးအချက်များသင်မသွားမီဤခရီးသွားအကြံဥာဏ်များကိုသေချာဖတ်ပါ။ ခရီးသွားခြင်းသည်အဓိကကျသောဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့်ပြည့်နှက်နေသည် - မည်သည့်နိုင်ငံသို့မည်သည့်နေရာသို့သွားရမည်၊ မည်မျှသုံးစွဲရမည်၊ မည်သည့်အချိန်တွင်စောင့်ဆိုင်းမည်ကိုရပ်တန့်ရမည်နှင့်နောက်ဆုံးတွင်လက်မှတ်ကြိုတင်စာရင်းသွင်းရန်အရေးကြီးသည့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည်။ သင်၏နောက်လမ်းကိုချောမွေ့စေရန်ရိုးရှင်းသောအကြံပြုချက်များ […]
သင်၏ဟိုတယ်နှင့် Hostel ကိုဘွတ်ကင်လုပ်ပါ
သင်၏ e-လက်မှတ်ကိုပြတိုက်များ၊ ဆောင်ပုဒ်ပန်းခြံများနှင့်လှုပ်ရှားမှုများအတွက်ဘွတ်ကင်လုပ်ပြီးသင်လိုင်းများမစောင့်ပါနှင့်
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ & Conditions
o ဘာသာပြန်ချက်အားလုံးကိုအတုထောက်လှမ်းရေးစက်မှဖန်တီးထားသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ အမှားများကိုခွင့်လွှတ်ပါ
o ဤ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်တွဲဖက်လင့်ခ်များပါ ၀ င်သောကြောင့် ၀ န်ဆောင်မှုတစ်စုံတစ်ရာကိုသင့်အတွက်အပိုကုန်ကျမှုမရှိပါကကျွန်ုပ်တို့ကော်မရှင်ယူနိုင်သည်။
မူပိုင်ခွင့် 2019 - 2020 | World Tourism Portal | မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး
ဤ ၀ ဘ်ဆိုဒ်သည်သင်၏အတွေ့အကြုံတိုးတက်စေရန် cookies များကိုအသုံးပြုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုဆက်လက်အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်၊ သင်သဘောတူသည်၊ သို့သော် အကယ်၍ သင်ဆန္ဒရှိပါကသင်ထွက်သွားနိုင်သည်။ ကျွန်တော်တို့၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာပေါ်လစီများကိုပိုမိုဖတ်ရှုပါ။ cookie settings ကိုလက်ခံ